Nhau - Maitiro Ekuvandudza Iyo Yevashandisi Chiitiko pane Yako E-Commerce Webhusaiti
Maitiro Ekuvandudza Iyo Yevashandisi Chiitiko pane Yako E-Commerce Webhusaiti
Kana zvasvika kune yako e-commerce webhusaiti, kupa yakanaka mushandisi ruzivo (UX) inotora zvakawanda kupfuura kungoita-rinotaridzika dhizaini.
Inosanganisira akati wandei zvinhu, zvese zvinoshanda pamwechete, kubatsira vanhu vanoenda kunzvimbo ino kutenderera uye kuwana izvo zvavari kutsvaga. Kubva pane zvigadzirwa zvechigadzirwa kune iyo webhusaiti chimiro, chimwe nechimwe chezvinhu izvi chinofanirwa kuve chakagadziriswa nehunhu UX mupfungwa.
Wagadzirira kudzidza zvakawanda? Kana zvirizvo, ramba uchiverenga.
Tungamira Vashanyi Vako kune Zvakagadzirirwa Chigadzirwa kana Sevhisi Kurudziro
Uine zvigadzirwa zvemunhu zvakagadzirwa, iwe unogona kutungamira vashandisi vako kune zvakanakisa zvigadzirwa uye nekuvabatsira kuti vatsvage zvitsva.
Izvi zvichabatsira kuwedzera yavo yepakati odha huwandu uye kugadzira iri nani UX. Izvi zvakafanana kuva ne-mu-munhu mutengi mumiriri anopa vatengi zvigadzirwa zvigadzirwa.
Pamwe nekupa kurudziro, iwe unogona zvakare kugadzira "inofambisa" kana "yakanyanya kutengesa" zvikamu. Izvi zviri kuenda kunoshanda zvirinani nekuda kwehukama humbowo hwavanopa. Zvinoitawo kuti vatengi vatende kuti kana vamwe vanhu vari kutsvaga zvigadzirwa izvi, inogona kunge iri zano rakanaka rechikonzero - izvi zvinogona kusanganisira zvinhu zvakanakisa zvekutenga. Wese munhu anoda kuve chikamu chezvinoitika maitiro.
Imwe nzira yekushandisa kurudziro ndeyekutengesa kumusoro kana kutengesa zvigadzirwa. Uine kumusoro kutengesa, unogona kuratidza vanhu vanoshanyira nzvimbo dzako sezvigadzirwa zviri zvemhando yepamusoro.
Zvekutengesa muchinjikwa, unogona kuratidza chero zvigadzirwa zvinowirirana izvo zvinobatsira kusimudzira ruzivo rwako rwechigadzirwa.
Gadzira iri Nyore Kufamba uye Yakarongeka Webhusaiti
Chimbofungidzira kana iwe ukapinda muchitoro cheimba yekutengesa kuti uone kuti zvese zvakasanganiswa uye pakanga pasina hurongwa.
Iwe waizonzwa sei? Vakarasika, vakatsamwa, vakagumbuka? Izvo zvinoitika kune e-commerce saiti vashanyi kana yako saiti yekufambisa iri subpar. Zvinozovatorera nguva yakareba kuti vawane zvigadzirwa zvavanoda, uye zvovaomesera kuti vawane zvitsva
Izvo iwe zvaunogona kushamisika, zvakadaro, ndizvo zvakanaka webhusaiti yekufambisa? Izvi zvinonyatsoenderana nekuti ndiani mutengi wako akanaka uye kuti vanotenga sei. Izvi ndizvo zvichatarisa zvigadzirwa zvekupatsanura zvaunoshandisa, zvikamu zvaunoshandisa, uye izvo zvaunosimbisa mumenyu huru. Kunyange ichi chiri chokwadi, pane mashoma akanakisa maitiro iwe aunogona kushandisa kubatsira kuvandudza UX.
Nhanho yekutanga ndeye kusarudza mhando dzemhando yepamusoro. Kana iwe uri kutengesa zvinhu zvevakadzi nevarume, izvi zvichave zviri zvikamu zvinoratidzwa kumusoro, pamwe neyepamusoro chikamu zvigadzirwa.
Imwe tsika yakanakisa ndeyekushandisa mafirita. Izvi zviri kuzobatsira mumwe munhu kuwana zvinhu zvavanoda. Zvimwe zvezvinyanya kuzivikanwa zvinosanganisira saizi, ruvara, mutengo, uye chikamu. Aya mafirita anogona kubatsira kuchengetedza mutsvaga nguva yakawanda uye kuita kuti iyo nzira yekutenga ive nyore uye inakidze.
Izvi zvinogona kuve chimwe chinhu icho chako cheIT network network timu inogona kubatsira nayo.
Kumbira uye Teerera kune Vatengi Mhinduro
Kunyangwe iwe uchitevera ese akanakisa maitiro, pachave paine chimwe chinhu iwe chaunogona kuita zvirinani.
Ichi ndicho chikonzero zvakakosha kuti iwe utsvage mutengi mhinduro. Izvi zviri kuenda kukuzivisa iwe nzvimbo dzinoda kuvandudzwa uye chii chingakubatsire iwe kuita chaicho shanduko. Mune mamwe mamiriro ezvinhu, vatengi vanogona kupa mazano enzvimbo dzinofanirwa kuvandudzwa, izvo zviri kuzokubatsira iwe kuchengetedza nguva maererano nezve zvekuita kana kuchinja.
Kune zvidimbu zvidiki zvinoenda mukuona kuti inobudirira mhinduro mhinduro. Imwe yeiyi mashandiro. Iwe unogona kugadzirisa yako mhinduro yekukumbira maemail kuti ubude kunze mushure mekunge mumwe munhu atenga kekutanga kana mushure mekunge imwe nguva yenguva yapfuura. Izvi zvichabatsira kuona kuenderana uye rega iwe uwedzere maitiro aya.
Kana iwe usingashandisi otomatiki, uchafanirwa kutumira maemail aya panguva imwe, paunogona kurangarira. Iyi isingabatsiri uye inopedza nguva.
Izvo zvinodawo kupa zvinokurudzira kune chero mutengi anopa mhinduro. Ichi chingave chemahara chipo kana dhisikaini kodhi. Iyi inzira yakanaka yekukurudzira vanhu vazhinji kuti vakuudze zvavanofunga. Kune akatiwandei maapplication aunogona kushandisa kubatsira kuita kuti iyi nzira ive nyore uye kukubatsira iwe kuteedzera mhedzisiro, iyo inogona kuve inosanganiswa nemamwe anozivikanwa e-commerce mapuratifomu, ayo anosanganisira Shopify.
Mushure mekunge maunganidza mhinduro dzese, unogona kuratidza iwo mazano uye ruzivo pasi pezvigadzirwa kana pane dzakasiyana nzvimbo dzesaiti. Izvi zvichakubatsira iwe kuti uwane kuvimba kwakanyanya kubva kune vashanyi vatsva.
Kana iwe ukatambira murombo mhinduro, ita shuwa yekutevera nemutengi asina kugutsikana kuti vazive kuti nyaya yavo iri kugadziriswa.
Ipa saiti kune Wishlist Sarudzo
Dzimwe nguva, kuwedzera chimwe chinhu kungoro kunogona kuve kuzvipira kune online shopper.
Kunyange ivo vangangoda chimwe chinhu, vangangodawo kuenderera vachitsvaga zvinhu zvakasiyana kuti vazvifananise nazvo. Kana, ivo vanogona kunge vasina chokwadi nezve chimwe chinhu uye vachida kuichengeta yekutenga pane imwe nguva.
Zvisinei nechikonzero, kupa chishuwo chinyorwa chisarudzo chemutengi kuchengetedza chigadzirwa inzira huru yekudzikisa kumanikidza kunoenda nekuisa chimwe chinhu mungoro.
Kana iwe ukasapa iyi sarudzo, vatengi vangafanirwa kurangarira zvavanoda uye voedza kuzviwana zvakare pane imwe nguva. Izvi zvinoguma riwedzere basa kumutengi uye rinodzora iyo yakazara UX. Zvakare, kana iwe ukaita iyo yekuchengetedza kune yaunoda rondedzero sarudzo, iwe une ruzivo rwemushandisi.
Kana vangobaya bhatani iri, unogona kuenda navo kune nyore kunyoresa fomu kuti uone kuti kwavo kusarudzwa kwakachengetedzwa.
Ndiyo Yako E-Commerce Saiti Mushandisi Yemahara?
Ichi chinhu chinofanirwa kutariswa nemuridzi wese saiti. Kana mhinduro iri "kwete," saka inogona kunge iri zano rakanaka kuita dzimwe shanduko.
Kuita izvi kuri kuenda kunotungamira kune vanofara vatengi uye, semhedzisiro, kumwe kutendeuka. Ive neshuwa yekuchengeta izvi mupfungwa uye shandisa iwo matipi ari pamusoro kuti uwane mhinduro dzakanakisa.
Post nguva: Aug-28-2020